April 29, 2021 - Pardeshi Khabar
कोरोनाबाट थप ३५ जनाको ज्यान गायो,झन्डै पाँच हजार सङ्क्रमित थपिए
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: April 29, 2021
१६ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४,९२९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १२,५९७ पीसीआर परीक्षणमा ४,८३१ जना र ९६३एन्टिजेन परीक्षणमा ९७ जना गरी ४,९२८ जना संक्रमित भेटिएका हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरससंक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३२४६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ८८८ रहेको छ । हाल नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार ११७ पुगेको छ । तीमध्ये होमआइसोलेसनमा ३० हजार ९१६ रफुर्सदमा
ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रमुख समाचार, स्वास्थ्य सम्बन्धी No Comments »
निषेधाज्ञाका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुला रहने
काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञाका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुला रहनेभएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घले निषेधाज्ञाको समयमा बैंकका सबै शाखाहरू खुला हुने जनाएको छ । सङ्घलेविज्ञप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालय नियमित सञ्चालन हुने जनाएको छ। सबै शाखा कार्यालय खुला भए पनि निषेधाज्ञाको अवधिमा ग्राहकलाई अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक बैंक नआउन पनि आग्रह गरेको छ । बैंकका सबै शाखामा ग्राहकको भीडभाड बढी हुने हुँदाभीड कम गर्नका लागि ग्राहकलाई अनुरोध गरिएको सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारीदिनुभयो । उहाँले नगद (नोट) कारोबारभन्दा बढी अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सङ्घलेनिषेधाज्ञाको समयमा बैंककाफुर्सदमा
ताजा खबर, नेपाली खबर, परदेशी समाचार, बिजनेष No Comments »
काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु : निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ?
काठमाण्डौ – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटाजिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा लगाएको छ । काठमाण्डौमा आजदेखि १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा हुने भएपछि गएरातिसम्मै काठमाण्डौबाट घरफर्कनेको घुइँचो लागेको थियो । चितवन, रुपन्देही, कैलाली र पर्सामा पनि आजैदेखि निषेधाज्ञालगाइएको छ । दाङ र पाल्पामा भोलिदेखि निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ भने बाँके, दाङ, कास्की र सुर्खेतमा यसअघिदेखि नैपूर्ण निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ । यसैगरी, बर्दिया, बाग्लुङ र कालीकोटमा सङ्क्रमणअवस्था हेरेर ठाउँ तोकेरै आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले बिना काम घर बाहिर ननिस्कन र अति आवश्यक काम परेरघरबाहिरफुर्सदमा
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: April 29, 2021
बैशाख १५,काठमाडौं । चीनमा श्रीमान्‌को धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई औषधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औषधी होइन, पुरुषलाई नपुंसक बनाउने औषधी हो । ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गोप्य तरिकाले यस्तो औषधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुंसकताको शिकार हुने गर्छन् । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गोप्य तरिकाले डायगाइलस्टीलबेस्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ताफुर्सदमा
चीनका महिला, नपुंसक बनाउने औषधी अन्तर्राष्ट्रिय, ताजा खबर, फोटो ग्यालरी No Comments »